တစ် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာဝယ်ရန်လုပ်နည်း – အဆိုပါ Tailoress
အဆိုပါ Tailoress အကြောင်း
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ / စည်းကမ်းချက်များ & အခြေအနေများ
သီးသန့်လုံခြုံရေး Tools များ
Romper / အိပ်စက်ခြင်းဝတ်စုံ
ထီးတပါး & Whippets
အင်္ကျီ / ဂျာကင်အင်္ကျီ
တစ် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာဝယ်ရန်လုပ်နည်း
အင်္ကျီ & ဂျာကင်အင်္ကျီ
ကို 'လှည်း ADD ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုလှည်းထုတ်ကုန် Add’ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ခလုတ်
အဆိုပါ Checkout ရှိသငျ့အသေးစိတ်ကို Enter
ကို 'PayPal ဆက်လက်ကလစ်နှိပ်ပါ’ ကြယ်သီး
သင့်ရဲ့ Paypal အကောင့် Login သို့မဟုတ်ဧည့်အဖြစ် checkout ဖို့ရှေးခယျြ
သင်နှစ်သက်တဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ငွေပေးချေမှု Make
သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုပြည့်စုံသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, သာမန်အားဖြင့်သာစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသည့်, သင်၌သင်တို့၏အမိန့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ရှိရာအဆိုပါTailoress®ပြန် redirected ပါလိမ့်မည် ငါ့အကောင့် (သငျသညျပြီးသားတဦးတည်းရှိခဲ့သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းမှာတဦးတည်းကိုဖန်တီးရန်ရှေးခယျြခဲ့လျှင်). သင့်အကောင့်ဧရိယာထံမှသင်တို့လည်းသင်၏ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. ငွေပေးချေမှုအပျေါမှာသငျသညျမြားကိုလညျးမကြာမီသင့်ရဲ့ download link ကိုပါဝင်သောအခြားအီးမေးလ်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သင်သည်သင်၏အမိန့်အသေးစိတျသိစေအီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
paypal အင်တာနက်ကျော်ဝယ်ယူတဲ့လုံခြုံပြီးလုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင်Tailoress®ထံမှဝယ်ယူရန်တစ် Paypal အကောင့်မလိုအပ်ပါဘူး. ဤနေရာတွင် Paypal အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည်.
ဘာသာပြန်ချက် / ငွေပေးချေမှုရမည့် / ငွေကြေး
တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ ပစ္စည်းများ ဦးထုပ် ကလေး ပစ္စည်းများ Leggings Preemie ကလေး Rompers / Sleepsuits လုပ်ကွက် ကလေးများ အမြိုးသမီးမြား ကြောင်များ ကလေးများ ပစ္စည်းများ အလိုက်အဝတ်အစား အဝတ်အစား အဝတ်အစား Leggings Romper / အိပ်စက်ခြင်းဝတ်စုံ ထိပ် ခွေး ပစ္စည်းများ အမျိုး ခွေးဘီလူး Dachshunds ထီးတပါး & Whippets အဝတ်အစား ဂျာကင်အင်္ကျီ Jumper Pyjamas ထိပ် အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်စေ ပရိဘောဂ ကလေးစောင် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ Menswear ပစ္စည်းများ ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ စမ်းသပ်ခြင်း Uncategorized အမြိုးသမီးမြား ပစ္စည်းများ အင်္ကျီ / ဂျာကင်အင်္ကျီ အဝတ်အစား အဝတ်အစား Jumper စားဆင်ယင် Jumpsuits Lingerie ဇာတ်လမ်းတိုများ ထမီ ရေကူးဝတ်စုံ ထိပ် ဘောင်းဘီရှည် Leggings အင်္ကျီ
အဆိုပါ Tailoress RSS Feed
Sphynx သင်ခန်းစာအတွက် Penny ဆွယ်တာ
Sphynx များအတွက် Cleopatra Pajama သင်ခန်းစာ
Sphynx အတွက် Aziza တစ်သင်းလုံးကဂါဝန်
Amir Tee & ကြောင်များအတွက် PDF Jumar ပုံစံ
ကြောင်များအတွက် PDF Penny Sweater Sweater
ကြောင်များအတွက် PDF Cleopatra pajamas ။ အပ်ချုပ်ပုံစံ
Charlize Swimsuit PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Bethany Joggers PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံ
Valentina အဝတ်အစား PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံ
Valentina Jumpsuit PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Giselle ကီမိုနို PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Dachshunds PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာများအတွက် Jasra Tee
Whippets နှင့်ထီးတပါးအဘို့အ Jasra Tee
ကေတီထိပ်တန်း PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
အမျိုးသားများအတွက်ဘို့နဲ့ Chris Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဘရုစ် Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Renata Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဂျို Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
အလက်ဇန်းဒါး Tee PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Eloise ထိပ်တန်း & စားဆင်ယင် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဂျော့ခ်ျ Flat Cap PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Sabrina Swimsuit PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဂလော်ဒီယာရေကူးဝတ်စုံနဲ့ Swimsuit ဟော့ဘောင်းဘီ Boy ဇာတ်လမ်းတိုများ PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဂျာစီ bra & ပြင်သစ် Knickers PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Kara-ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ Swimsuit ဟော့ဘောင်းဘီ Boy ဇာတ်လမ်းတိုများ PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Freya Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဆိုဖီ Shrug PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Olivia ပွင့်လင်းသို့ပြန်သွားရန်ထိပ်တန်း PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Karli Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
လီလီရေတံခွန် Cardigan PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Agatha အလွှာထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
အသက်ကလေးများအတွက် Arabella ထိပ်တန်း PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ 1-6 အနှစ်
ဂျော်ဂျီယာမြင်းစီးနိုင်ငံကောင်းဘွိုင် Cowgirl CHAP PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဂျူလီယန် Sarong လက်ကိုင်ပဝါတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်ကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာ
ကလေးသူငယ်များကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာဘို့ Molly အလိုက်အဝတ်အစား Romper အိပ်စက်ခြင်းဝတ်စုံ
Dogs ကို PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာဘို့ Bella Pyjamas
ကကြိုးတန်ဆာ / ခွေးအဝတ်အစား PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာဘို့ခဲလိုက်လျောညီထွေ
Jenny Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Dogs ကို PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာဘို့ Fido Jumper ဆွယ်တာအင်္ကျီထိပ်တန်း
Dogs ကို PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာဘို့ Jasra Tee
Dogs ကို PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာများအတွက် Timmy Gilet
Dogs ကို PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာဘို့နဂါး Jacket
Penelope လည်ပင်း Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာထိုး
Toby ဂျာစီ Raglan အင်္ကျီလက်
Georgianna Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Annie Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Marisa Monokini PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Marisa ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Marisa Monokini & ရေကူးဝတ်စုံနဲ့သတ်မှတ်မည် PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Christina အင်္ကျီကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Louise Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ (50'' ကိုယ့်စတိုင်)
Isabel လက်ကိုင်ပဝါထိပ်တန်း & စားဆင်ယင် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစား
Jessie Leggings – ကလေး – PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Hermia ရင်ခွင်ပိုက် Dress / သာ costume ကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Isabel လက်ကိုင်ပဝါ Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Esta Jumper Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Welt Pocket PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Annabelle အင်္ကျီကို PDF အပ်ချုပ်စံနမူနာ
Frané Jumper ကို PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
ဘာဘရာအင်္ကျီကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Tatiana ဂျာစီတစ်ယောက်ရဲ့အဝတ်ကို PDF အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Ellie Easy-Fit Tank & သီးနှံထိပ်တန်း PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ဟိုင်ဒီနှင်းဆီပန်း Headband PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ဟိုင်ဒီနှင်းဆီပန်းမိန်းကလေးသတို့သမီးအရံ Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ထည် Roses PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Josie ကိုဖွင့်သို့ပြန်သွားရန်ထိပ်တန်း PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
Angela V-လည်ပင်းထိပ်တန်း PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Barbara Monokini PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
အသီနာ Cowl Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ဂျာစီပြင်သစ် Knickers PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ဂျာစီအင်္ကျီထိပ်တန်း PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ဂျာစီ bra PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
စားဖိုမှူးဟက် PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Corset PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
လက်ကိုင်ခတ်ခေါင်းစဉ် PDF ကိုအပ်ချုပ်ပုံစံ
Libi Dress PDF ကိုစံနမူနာ
ချိန်ညှိ bra သိုင်းကြိုးသင်ခန်းစာ
hood ကို Jumper Dress PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ဂျနီဖာ Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာအရွယ်အစား 4-18
Beanbag သဘာပတိ PDF ကိုစံနမူနာ
Safari ကကလေးစောင် 1 PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ခမညျးတျောခရစ်စမတ်စန်တာကိပ် PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
V-လည်ပင်း Swimsuit PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
Mini ကိုထိပ်တန်းဟက် PDF ကိုစံနမူနာ
Monokini Swimsuit PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
ကလေး & အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစား – တိရိစ္ဆာန်ဟက် – PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
0-14 YRS – အချိုးမညီ Sleepsuit PDF ကိုစံနမူနာ
သားသမီးရဲ့ကွောငျကလေး – Playsuit PDF ကိုစံနမူနာ
သားသမီးရဲ့ကြက် – Playsuit သာ costume Pyjama PDF ကိုစံနမူနာ
သားသမီးရဲ့သိုးသငယ်ကို – Playsuit သာ costume Pyjama PDF ကိုစံနမူနာ
သားသမီးရဲ့ Bunny – Playsuit သာ costume Pyjama PDF ကိုစံနမူနာ
ဒီ website သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်. ကျနော်တို့သင်ဤအတူအိုကေပါပဲယူဆပါလိမ့်မယ်, သို့သော်သင်ရွေးချယ်ထွက်နိုင်ပါတယ်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်.Accept ပယ်ချ ဆက်ဖတ်ရန်
Privacy & Cookies တွေကိုပေါ်လစီ
ဒီ website ကိုသင်က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်သွားလာနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်. ဒီကွတ်ကီးတွေကိုထဲက, သူတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြုပြင်ဘို့မရှိမဖြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့လိုအပ်သောအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်သော cookies များကိုသင်၏ browser ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားသည်. ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကူညီ Third-party cookies များကိုအသုံးပြုရန်နှင့်သင်ဤ website ကိုသုံးပါကိုမည်သို့နားလည်. ဤရွေ့ကား cookies များကိုသာသင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ browser မှာသိမ်းဆည်းထားမည်. သငျသညျရွေးချယ်ထွက်ဤ cookies တွေကို၏ထို option ကိုလည်းပြီ. သို့သော်ဤ cookies များကိုတချို့၏ထွက်ဝင်ရောက်ခြင်းသင့်အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံအားတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ.
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်သော cookies များကိုလုံးဝမရှိမဖြစ်များမှာ. ဤကဏ္ဍတွင်သာအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံရေး features တွေကိုသေချာကြောင်း cookies များကိုပါဝင်သည်. ဤရွေ့ကား cookies များကိုမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားကြဘူး.
ဝက်ဘ်ဆိုက်အလုပ်လုပ်ဘို့အထူးသဖြင့်လိုအပ်သောမကျမည်အကြောင်းနှင့် analytics မှတဆင့်အသုံးပြုသူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းရန်အထူးကိုအသုံးပြုသည်ဆို cookies တွေကို, ကြော်ငြာတွေကို, အခြားအ embedded contents တွေကို Non-လိုအပ်သော cookies များကိုအဖြစ်ချေါနေကြ. ကြိုတင်သင့်ရဲ့ website မှာဒီကွတ်ကီးတွေကိုအပြေးဖို့အသုံးပြုသူသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့မဖြစ်မနေဒါဟာဖြစ်ပါသည်.